Window7ရဲ့ Task bar Thumbnails Preview ကိုအရှိန်မြှင့်ချင်ရင် ~ မျိုးကို
Window7ရဲ့ Task bar Thumbnails Preview ကိုအရှိန်မြှင့်ချင်ရင်
23:11 Technique, Window7No comments
Window7ဟာ Program Icon လေးတွေပေါ်ကို Mouse နဲ့ထောက်ကြည့်လိုက် တဲ့ အခါမှာ Task Bar Thumbnails ရဲ့ Preview ကိုကြည့်နိုင်ဖို့ feature တစ်ခုလည်းထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ Icon လေးတွေ ပေါ်ကို Mouse တင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ Preview လေးကိုကြည့်ရဖို့ အတွက် ကြာချိန်လေး ရှိနေတယ် ဆိုတာ ကိုသတိထားကောင်းထားမိမှာပါ။ အဲဒီ Thumbnails Preview ကို အရှိန်မြှင့်ချင်ရင် ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလေးတွေနဲ့ ပဲ Delay Time ကို ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
လုပ်ကြည့်ချင်ရင် Registry ကတစ်ဆင့် လုပ်ရမှာပါ။
1.Start Menu က Run ကိုဖွင့်ပါ။ OR Win Key + R ကို တွဲရိုက်ပါ။
2.Box လေးပွင့်လာရင် regedit လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ Or OK လိုက်ပါ။
3.ဒီလို Window လေးကျလာပြီ ဆိုရင် HKEY_CURRENT_USER ကို Click နှိပ်ပါ။
4. Control Panel ကို Click ပါ။
5. Mouse ကိုသွားပါ။
6.ညာဘက် Panel ထဲက Mouse Hover Time ကို Click နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
7.ဒီလို Window လေးကျလာပီဆိုရင်တော့ Value ကို ( o ) သို့ပြောင်းပေးလိုက်ပြီး OK လိုက်ပါ။
8. Registry Editor ကိုပိတ်ပီး Restart လုပ်ပေးလိုက်ပါ။